Easy Japanese in Burmese - Lesson 19 | NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 19
အန်းနာဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျက်ခြေပြတ် သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆာ့ခူရာဆီကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ကူညီဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အန်းနာတစ်ယောက် ဆာ့ခူရာတို့ ရိုဒိုရီဂိုတို့နဲ့ ပြန်တွေ့ပါ့ မလား။
သင်ခန်းစာ 19 ၁ဝ မိနစ်
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 19
おーい、アンナさん。 ဟေး ... အန်းနာ။
ဟေး ... အန်းနာ။
みんな。 ဟေး ... အားလုံး (သူငယ်ချင်းတို့)
ဟေး ... အားလုံး (သူငယ်ချင်းတို့)
よかった。心配したよ。 တော်ပါသေးရဲ့။ စိတ်ပူနေတာ။
カメラが安かったので、つい見てしまいました。 တောင်းပန်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေက ဈေးပေါတာကြောင့် အမှတ်တမဲ့ ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
တောင်းပန်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေက ဈေးပေါတာကြောင့် အမှတ်တမဲ့ ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။
နာမဝိသေသနတွေ ရဲ့ အတိတ်ကာလပုံစံပါ။
ဂျပန့်နာမဝိသေသနတွေမှာ အတိတ်ကာလပုံစံ တွေရှိပါတယ်။ I-ပုံစံ နာမဝိသေသန ကို အတိတ်ကာလပုံစံ ရဖို့ဆိုရင် I-ကို KATTA. လို့ ပြောင်းရပါမယ်။NA- ပုံစံ နာမဝိသေသနတွေကို အတိတ်ကာလပုံစံ ရဖို့ဆိုရင် DATTA ဆိုတာကို ပေါင်းထည့်ရ မယ်။
I- ပုံစံ နာမဝိသေသန ။
YASUI (ဈေးသက်သာသော) ။
NA- ပုံစံ နာမဝိသေသန။
SUKI (ကြိုက်သော )။
SUKI DATTA, ( ကြိုက်ခဲ့သော )။
ချွင်းချက် ။ II(ကောင်းသော)။
ဂျပန်စကားမှာ I-နာမဝိသေ သန နဲ့ NA -နာမဝိသေ သန ၂ မျိုးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ I-နာမဝိသေသနတွေဆိုတာက I ဆိုတဲ့ စာလုံးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ဥပမာ - ဈေးသက်သာသောလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ YASUI ဆိုတဲ့စာကားလုံးမျိုးပါ။ NA-နာမဝိသေသနတွေဆိုတာ SUKI (ကြိုက်သော) ဆိုတဲ့ နာမဝိသေသနလိုမျိုး နာမ်ကို အထူးပြုချင်တဲ့အခါ NA ဆိုတာကို ပေါင်းထည့်တဲ့ နာမဝိသေသနကို ခေါ်တာပါ။ နာမ်ကို အထူးပြုချင်တဲ့ အခါ SUKI က SUKINA လို့ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဥပမာ - ကြိုက်တဲ့မန်းဂါ့ကာတွန်းလို့ ပြောချင်ရင် SUKINA MANGA. လို့ပြောရမှာပါ။
ကျမလမ်းပျောက်သွားတော့ ဆာ့ခူရာနဲ့ ရိုဒိုရီဂိုတို့က အရမ်း စိတ်ပူနေခဲ့ကြတယ်။ တို့တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တို့ သူတို့ကို စောင့်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ကင်မရာတစ်လုံး ဝယ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကင်မရာကို သုံးပြီး ဘယ်လို ဓါတ်ပုံမျိုးတွေ ရိုက်ရမလဲ။
သင်ခန်းစာ 18 လမ်းပျောက်သွားပါတယ်